Raisul wasaare shaaciyey inuu xilka ka degayo, wiilkiisana xukunka ku wareejinayo (Daawo Sawirro) - iftineducation.com
Raisul wasaare shaaciyey inuu xilka ka degayo, wiilkiisana xukunka ku wareejinayo (Daawo Sawirro)
iftineducation.com – Ra’isul wasaaraha dalka Mauritius, Anerood Jugnauth ayaa sheegay inuu iscasilayo uuna xilka ku wareejinayo wiilkiisa Pravind.
Anerood Jugnauth oo 86-sano jir ah ayaa xilka qabtay sanadkii 1982-dii, sidoo kale 2014-kii ayuu markale ku guuleystay doorashada.
Hadal uu ka jeediyay TV-ga dalkaasi, Mr Jugnauth, wuxuu sheegay inuu isu casilaayo si uu xilka ugu wareejiyo qof uu ugu yeeray nin dhallinyaro ah oo firfircoon kaasoo uu ula jeedo wiilkiisa oo hadda ah wasiirka Maaliyadda ee dalkaasi.
Siyaasiyiinta axsaabta Mucaaradka ayaa tallaabadaasi cambaareeyay, balse waxaa la sheegayaa ineysan awood u laheyn talaabo iney ka qaadaan.
Wiilkiisa Yar ayaa sidoo kale ah madaxda xisbiga ugu weyn isbeheysiga talada dalkaasi haya, iyadoo qoyska Anerood Jugnauth ay awood ballaaran ku leeyihiin talada wadankaas.
Ra’iisul wasaaraha ayaa hadalkiisa ku sheegay in xil isku wareejinta ay tahay dhaqan reer galbeed, isagoo tusaale u soo qaatay In david Cameroon uu jagada ku wareejiyay Theresa May, iyadoo doorasho aysan ka dhicin Britain.
Ra’iisul wasaarihii hore ee dalkaas Navin Ramgoolam, ayaa ka digay talaabadan oo uu ku tilmaamay inay qoyska ka dhigi karaan Mauritius wax uu ku tilmaamay Jamhuuriyadda mooska.
Dalka Mauritius ayaa ku yaalla badweynta Hindiya waxaa horey u gumeystay Britain, waxaana dhaqaalaha dalkaas uu ku tiirsan yahay dalxiiska iyo kalluumeysiga.
Daawo Sawirada: Shil Tareen Qasaaro badan dhaliyay oo ka dhacay dalka Hindiya
Kenya oo sheegtay ineysan joojineyn duulimaadyada Soomaalida ee lagu baaro Wajeer